u-Markram uzohola i-SA A kwi-series yezinsuku ezine bedlala ne-India A
u-Aiden Markram uzohola iqembu le-SA A kwimidlalo yabo embili yezinsuku ezine bedlala ne-India A ngasekupheleni kwalenyanga.
u-Markram use-England neqembu lama-Standard Bank Proteas. Iqembu elizodlala ne-India A kubalwa khona abadlali ababili beqembu lama-Test, okwenza konke u-Andile Phehlukwayo nophosa ngokushesha u-Duanne Olivier.
u-Stephen Cook naye ubuyela eqenjini le-SA A.
Umdlali omusha kulesigaba i-leg spinner kuma-Multiply Titans, u-Shaun von Berg.
“Ibalulekile le-series emuva komdlalo ophoxile we-Test kudlalwa ne-England Lions ekuqaleni kwalonyaka,” kuphawula okhethayo we-Cricket South Africa (CSA) u-Linda Zondi. “Ithuba elihle leli kubadlali ukuveza ukuthi bangenzani ngaphansi kwesimo abasazi kahle bedlala neqembu elivivinyayo.”